Darajada Xisaabta vs Yoast SEO: Keebaa u Fiican SEO? (2021 Edition) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Darajada Xisaabta vs Yoast SEO: Keebaa u Fiican SEO? (Daabacaada 2021)
Darajada Xisaabta vs Yoast SEO: Keebaa u Fiican SEO? (Daabacaada 2021)
Isku day inaad go'aansato inta u dhaxaysa Rank Math vs Yoast SEO si aad wax uga qabato hagaajinta mashiinka raadinta ee boggaaga WordPress?
Haddii aad rabto inaad hagaajiso WordPress SEO, waxaad gabi ahaanba u baahan tahay plugin SEO ah. Oo marka ay timaado in plugins SEO WordPress, Yoast SEO hubaal waa magaca ugu weyn ee magaalada oo tan iyo aad u qurux badan bilowgii WordPress.
Si kastaba ha noqotee, halka Yoast SEO ay hesho inta badan saxafada, taasi macnaheedu maaha inay tahay ikhtiyaarkaaga tayada kaliya ee SEO ee WordPress. Waxaa jira dhowr plugins oo kale oo caan ah oo ay ku jiraan Xisaabta Darajada, midda aan la barbar dhigi doonno Yoast SEO.
Xisaabta darajada waa qaraabo cusub (marka la barbar dhigo Yoast SEO), laakiin si degdeg ah ayey ugu kortay caannimada waxayna leedahay guuto taageerayaal daacad ah, sida ay caddaynayso kooxdeeda rasmiga ah ee Facebook.
Marka, keebaa tahay inaad doorato Darajada Xisaabta vs Yoast SEO isbarbardhigga? Hagaag, taasi waa mawduuca qoraalkan.
Ma aha qasab inaan doorano "guuleeyaha" iyo "khasaaraha". Taa baddalkeeda, waxaan kaliya muujin doonaa waxa plugin kasta uu si fiican u qabto iyo sida ay isu barbar dhigaan si aad u dooran karto ikhtiyaarka ugu habboon baahiyahaaga, heerka aqoonta, iyo miisaaniyadda.
Waxaan ku bilaabaynaa in aan soo bandhigno doorasho kasta si yar oo faahfaahsan. Kadibna, waxaanu si qoto dheer ugu barbar dhigi doonaa qaybo kala duwan.
Diyaar? Aan quusno!
Waa waqtigii dagaalka SEO - Rank Math vs Yoast SEO. Waa kuwee plugin u fiican goobtaada? 💥 Faahfaahinta oo dhan waa halkaan👇Riix halkan Tweet
Darajada Xisaab vs Yoast SEO - Horudhacyo
Si wax loo bilaabo, waxaanu si dhakhso ah u soo bandhigi doonaa Yoast SEO iyo Xisaabta Darajada si aan u dejino marxaladda isbarbardhigga gacmaheena badan.
Asal ahaan waxaa la bilaabay ilaa 2010, Yoast SEO waa tan ugu caansan WordPress SEO plugin. Waxaa aasaasay Joost de Valk, kaasoo ahaa lataliye SEO ka hor inta uusan bilaabin Yoast SEO.
Siyaabo badan, Yoast SEO waa nooc ka mid ah "de facto" WordPress SEO plugin. Tusaale ahaan, haddii aad akhrido cashar ku saabsan WordPress SEO, waxay u badan tahay inay u malaynayso inaad isticmaalayso Yoast SEO.
Marka laga soo tago inuu yahay plugin SEO-ga WordPress ugu caansan, sidoo kale guud ahaan waa mid ka mid ah plugins-yada WordPress-ka ugu caansan ee mar walba, iyadoo in ka badan 288 milyan la soo dejiyey ilaa maanta.
Xisaabta darajada, dhanka kale, waa WordPress SEO-ga kor u kaca. Waxaa la bilaabay dabayaaqadii 2018, in kasta oo ay ku jirtay horumar sannado badan ka hor. Iyadoo plugin SEO ah uu cusub yahay, Xisaabta Darajooyinka waxay ka timaaddaa kooxda horumarinta WordPress ee la aasaasay ee MyThemeShop.
Tan iyo markii la bilaabay, Xisaabta darajada ayaa si degdeg ah ugu kortay caannimada waxayna hadda u qalantaa taajka plugin SEO-ga labaad ee ugu caansan *. In ka yar laba sano, waxay ka tagtay eber aad u qurux badan oo waxay noqotay tiro rakiban oo firfircoon oo ka badan 500,000 oo goobood, taas oo cajiib u ah plugin WordPress ah. Waxay ku dhammaatay kobacan inta badan dhabarka liiska sifada bilaashka ah ee dheer, sida aad hoos ku arki doonto.
* Farsamo ahaan, Dhammaan Xidhmada Hal SEO ku jira waa plugin-ka labaad ee ugu caansan ee lagu rakibo tirinta WordPress.org. Si kastaba ha ahaatee, Xisaabta Darajooyinka ayaa hubaal ah inay leedahay dardar dheeraad ah waxayna leedahay soo dejin cusub oo aad u sarreeya.
Darajada Xisaab vs Yoast SEO - Astaamaha
Hadda, aan galno qaybta gacan-ku-oolka ah ee darajadeena Xisaabta vs Yoast SEO isbarbardhigga, annaga oo ka bilaabayna eegno astaamo kasta oo plugin ah.
Marka la eego tirada badan ee astaamaha la heli karo, Xisaabta darajada waxay bixisaa wax ka badan Yoast SEO, gaar ahaan marka la barbardhigo kaliya noocyada bilaashka ah. Taas macnaheedu maaha inay "wanaagsan tahay" sababtoo ah waxa ugu muhiimsan halkan waa inaad dhab ahaantii isticmaali doonto iyo haddii kale.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaali doonto sifooyinkaas dheeraadka ah, taasi faa'iido ayay u tahay Darajada Xisaabta.
Tilmaamo Bilaash ah:
Deji cinwaannada SEO / sharraxaadaha meta - Samee habab si toos ah ugu dabaqa nuxurka oo gacanta ku hagaaji cinwaanada SEO ee qaybaha shakhsi ahaaneed.
Deji sharraxaadaha warbaahinta bulshada - xakameyn qoraalka iyo sawirada Facebook iyo Twitter.
Falanqaynta ereyga muhiimka ah diiradda (waxay taageertaa ereyo badan oo muhiim ah) - Geli hal ama in ka badan oo ah ereyada muhiimka ah oo arag sida loo wanaajiyey waxa ku jira ereyada muhiimka ah.
Sitemap XML – Samee khariidad goobeedka XML oo la beddeli karo oo ka badan kan caadiga ah ee khariidadda goobta WordPress u ogol yahay.
Xogta qaabaysan/schema - dejiso calaamadaynta schema ee goobta oo dhan iyo sidoo kale xakamee calaamadaynta schema ee qaybo gaar ah oo ka kooban.
Search tacsiyeeyaan - ku xidh boggaaga Google Search Console si aad si toos ah ugu soo gudbiso khariidadaha goobta oo aad u aragto falanqaynta Console Search gudaha dashboardkaaga WordPress.
Deegaanka SEO iyo Garaafka Aqoonta - U wanaaji goobtaada SEO-ga maxalliga ah (hal goob oo keliya ayaa bilaash ah)
Sawirka SEO - hagaajin sawirka SEO oo si toos ah u deji alt iyo tags cinwaan.
Soo jeedinta Xiriirinta Gudaha - Xisaabta darajada ayaa kuu soo jeedin doonta macluumaadka kale ee ku jira boggaaga si loogu xidho markaad ka shaqaynayso tifaftiraha.
Breadcrumbs - ku dar jajab rootiga goobtaada.
Isku xidhka Counter – tiri tirada isku xirka gudaha iyo dibadda ee ku jira macluumaadkaaga.
Dib-u-dirista - abuur oo maamul 301 iyo 302 jihooyin.
404 Monitor - La soco goobtaada 404 khalad. Waxaad markaa dib u hagaajin kartaa khaladaadka 404 ee caadiga ah boggaga kale ee boggaaga.
Google Analytics - ku dar koodka raadraaca oo arag macluumaadka.
WooCommerce SEO aasaasiga ah - dejiso cinwaanada / sharraxaadda alaabta/dukaanka.
Tilmaamaha ugu sareeya:
Dabagalka darajada kelmad- lasoco qiimaynta matoorka raadinta ee goobtaada iyo waxqabadka ereyada muhiimka ah ee 12 bilood ee la soo dhaafay (qurux gaar ah)
Isdhexgalka Google Trends
Khariidadda Google Video SEO
Khariidadda Google News SEO
Goobo badan oo SEO ah oo deegaanka ah
Noocyo badan oo hore loo sii qeexay (20+)
Taariikhda kasbashada Google AdSense
Si toos ah u calaamadee sawirada warbaahinta bulshada
Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan Xisaabta Darajooyinka ayaa ah in dhammaan sifooyinkan ay yihiin kuwo modular ah - markaa waxaad si fudud u baabi'in kartaa astaamo kasta oo aadan qorsheyneynin inaad isticmaasho.
Yoast SEO waxay leedahay liis sifo kooban oo xadidan oo ah nooca bilaashka ah, laakiin kooxda Yoast SEO waxay bixisaa wax-ku-kordhin badan oo aad u isticmaali karto si aad u kordhiso astaamaha asaasiga ah. Si kastaba ha noqotee, sidaan kor ku soo sheegnay, waxaad arki doontaa in Yoast SEO ay ku dallacdo dhowr astaamood oo Darajada Xisaabtu ay ku siiso lacag la’aan, sida maamulaha wareejinta, falanqaynta ereyada muhiimka ah ee badan, iyo soo jeedinta isku xirka gudaha.
Astaamaha Aasaasiga ah:
Sitemap XML – Samee khariidad goobeedka XML la beddeli karo oo ka badan kan tafatiran ee qaabka WordPress kuu ogol yahay.
Falanqaynta ereyga muhiimka ah diiradda saar (hal kelmad oo keliya) - Geli hal kelmad muhiim ah oo arag sida loogu wanajiyay waxa ku jira erayga muhiimka ah.
Qorshaha goobta oo dhan - ku dar calaamadaynta schema goobta oo dhan.
Nooca qorshaha nuxurka - U deji nooca schema gaarka ah ee qaybo gaar ah oo ka kooban (waxaad sidoo kale dejin kartaa default goobta oo dhan).
Search tacsiyeeyaan - ku xaqiiji goobtaada Search Console
WooCommerce SEO aasaasiga ah - tusaale u deji cinwaannada/ sharraxaadaha badeecadaha iyo boggaga dukaanka.
Nuxurka dhagaxa geesta - U calaamadee boggaga muhiimka ah sida "Dhagaxa Geeska" si aad uga caawiso tayaynta iyaga oo aad u hesho xidhiidho badan oo gudaha ah.
Isku xidhka Counter – tiri tirada xiriiriyeyaasha gudaha ee ku jira macluumaadkaaga.
Astaamaha Qiimaha Muhiimka ah ee Muhiimka ah:
Maamulaha wareejinta - abuur oo maamul 301 iyo 302 jihooyin.
Soo jeedinta isku xirka gudaha - Yoast SEO waxay soo jeedin doontaa waxyaabo kale oo ku yaal boggaaga si aad ugu xirto.
Isku xirka gudaha ayaa xannibaya - ku dar baloog si toos ah ugu jira xiriiriyeyaasha khuseeya halkii aad gacanta ku dari lahayd.
Erayo muhiim ah oo dhowr ah - u baar waxa ku jira ereyo muhiim ah oo badan.
Erayada muhiimka ah ee la xidhiidha - Soo saar kelmadaha muhiimka ah ee la xiriira iyadoo lagu salaynayo xogta SEMrush.
Yoast SEO sidoo kale waxay bixisaa wax-ka-kordhin kale oo lacag-bixineed oo loogu talagalay noocyo gaar ah oo SEO ah. Kuwani waxay ku siinayaan astaamo sidoo kale inta badan laga heli karo nooca qaaliga ah ee Xisaabta Darajada, in kasta oo Xisaabta Darajada ay ku jirto qaar ka mid ah astaamaha SEO ee nooca bilaashka ah:
SEO-ga deegaanka - waxay ku daraysaa xogta habaysan ee meheradaha maxaliga ah/Graafka Aqoonta, waxay wanaajisaa boggaaga xidhiidhka, waxayna taageertaa goobo badan oo muuqaal ah.
Fiidiyowga SEO - hel fiidiyowyadaada ku taxan Google Videos oo ku dar muuqaallo kale oo SEO ah oo kor u qaadaya.
Warka SEO - U yeel boggaaga Google News, ping Google marka aad daabacdo qoraal, samee khariidad bogga XML News, iyo in ka badan.
WooCommerce SEO (Horumar) - Hel waxyaabo badan oo WooCommerce SEO ah sida macluumaadka garaafyada warbaahinta bulshada, khariidad goobeedka XML oo nadiif ah, iyo in ka badan.
Darajada Xisaab vs Yoast SEO - Habka Dejinta
Labada darajada Xisaabta iyo Yoast SEO waxay qabtaan shaqo wanaagsan oo ah inay kugu dhejiyaan goobo muhiim ah. Labaduba waa guud ahaan quruxsan isticmaale-saaxiibtinimo, sidoo kale.
Guud ahaan, qaybtani waa wax la iska tuuray oo run ahaantii waxay hoos ugu soo degtaa dookha shakhsi ahaaneed marka loo eego midka aad doorbidayso.
Marka ugu horraysa ee aad bilowdo Xisaabta Darajada, waxa ay furaysaa saaxir dejineed si uu kaaga caawiyo habaynta astaamaha aasaasiga ah ee muhiimka ah. Waxa kale oo aad si ikhtiyaari ah ugu xidhi kartaa akoonkaaga Darajada Xisaabta ee bilaashka ah si aad u furto sifooyinka qaarkood. Ma samaynaysid waxay leeyihiin Si aad tan u samayso si aad u isticmaasho plugin, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ku xidho akoon bilaash ah si aad u furto dhammaan sifooyinka.
Guud ahaan, saaxirku si wanaagsan ayaa loo sameeyay wuxuuna bixiyaa khibrado la habeeyay oo loogu talagalay isticmaaleyaasha aasaasiga ah iyo kuwa horumarsan:
Saaxir dejinta xisaabta ee darajada
Wizard-ka dejinta, waxaad u habayn doontaa:
Macluumaadka schema aasaasiga ah
Google Analytics iyo Google Search Console isdhexgalka, haddii aad rabto in aad isticmaasho.
Khariidadda goobta XML.
Dejinta kale ee aasaasiga ah, sida haddii la noindex qaybta faaruq ah iyo in la calaamadeeyo archives.
Isticmaalka saaxir dejinta si loo habeeyo sifooyinka
Marka aad dhex marto qalabka wax-soo-saarka, waxa ay sidoo kale ku siinaysaa doorasho aad ku dejiso doorashooyin horumarsan kuwaas oo furi doona qaar ka mid ah tillaabooyin dheeri ah sida:
Maamule door (si loo xakameeyo doorarka WordPress ee geli kara Xisaabta Darajada).
404 la socodka qaladka.
Dejinta calaamadaynta schema oo faahfaahsan, tusaale ahaan dejinta noocyada schema-ga ee noocyada boostada ee kala duwan.
Ka dib marka la dhammeeyo saaxiraha dejinta, waxay sidoo kale kuu bilaabi doontaa maareeyaha moduleka kaas oo taxaya sifo kasta oo kuu ogolaanaya:
Daar/dami qayb kasta.
Habee dhammaan cutubyada aad karti-gelisay
Qaabka qaabaysan ee lagu maamulay Xisaabta Darajada
Hadaad gudaha gasho Hab fudud, ma arki doontid dhammaan cutubyada. Waxaad u baahan tahay inaad karti u yeelato Habka Sare si aad u aragto module kasta.
Sida Xisaabta Darajada, Yoast SEO waxaa ku jira saaxir qaabeynta si uu kaaga caawiyo inaad dhaqso u kacdo oo aad u ordo, in kasta oo aad u baahan doonto inaad ka soo saarto aaladda WordPress.
Saaxirkani waxa kale oo uu si fiican kuugu qabtaa dhammaan goobaha muhiimka ah sida:
Xogta qorshaha aasaasiga ah ee goobta oo dhan
Haddi aad tilmaamto goobtaada iyo inkale
Qaababka cinwaanka SEO
Dashboard-ka Yoast SEO waxa kale oo ka mid ah talooyin/soo-jeedin waxayna calaamadayn doontaa wixii arrimo ah ee ka iman kara goobtaada:
Sida Xisaabta Darajada, Yoast SEO sidoo kale waxay isticmaashaa hab habaysan oo kuu ogolaanaya inaad gabto sifooyinka aadan rabin inaad isticmaasho. Waxaad ka arki kartaa sifooyinka ku jira Features tab oo isticmaal toggle si aad u damiso sifooyinka gaarka ah:
Maareynta Yoast SEO muuqaalkeeda
Darajada Xisaab vs Yoast SEO - Interface User
Markii aan is barbar dhignay habka dejinta ee kor ku xusan, waxaad horeyba u aragtay qaar ka mid ah interface interface. Marka xigta, waxaanu eegi doonaa sida is-dhexgalka isticmaalaha uu yahay ficillada maalinlaha ah, tusaale ahaan dejinta hagaajinta bog ama bog gaar ah.
Waxaan sidoo kale soo bandhigi doonaa dhowr ka mid ah qaybaha interface ugu gaarka ah ee ka baxsan taas.
Haddii aad isticmaalayso tifaftiraha xannibaadda WordPress (Gutenberg), Xisaabta darajada waxay si buuxda u dhexgashaa tifaftiraha block. Taasi waa, ma isticmaali doontid habka "sanduuqa meta" ee aad ka hesho tafatiraha Classic.
Waxaad furi kartaa jaangooyooyinka xisaabta ee darajada adiga oo gujinaya calaamadda aaladda. Dejinta dhinaca bar waxay u qaybsan tahay afar tab:
General – Tafatir tafaasiisha googo’a, deji kelmad muhiim ah, oo arag falanqaynta.
Advanced - habee macluumaadka meta robots, sida ku darista summada noindexka.
Schema - dejiso calaamadaynta schema/xogta habaysan.
Bulshada - U samee macluumaadka garaafyada bulshada ee Facebook iyo Twitter.
Interface-ka xisaabta darajada ee tifaftiraha block
Qayb kale oo gaar ah oo ka mid ah Xisaabta Darajada waa iyada Analytics interface. Iyadoo ku xiran haddii aad haysato nooca bilaashka ah ama pro, waxaad awoodi doontaa inaad la socoto:
Warbixinnada Console-ka raadinta (tusaale aragtiyaha raadinta iyo boosaska ereyga muhiimka ah). Bilaash
Qiimaynta ereyada muhiimka ah/waxqabadka. La bixiyay
Tirakoobka gaadiidka ee Google Analytics. La bixiyay Xisaabta darajada waxay sidoo kale kuwan la mid noqon doontaa qayb kasta oo ka mid ah dhibcaha SEO.
Yoast SEO waxay ku siinaysaa laba siyaabood oo aad ku dejisan karto macluumaadkaaga SEO markaad ka shaqaynayso tifaftiraha qayb shakhsi ah:
Waxaad ka heleysaa sanduuqa meta hoosta tifaftiraha, kaasoo ka muuqda labadaba tifaftiraha block iyo tafatiraha caadiga ah. Kani waa dariiqii "jir" ee loo habeeyo Yoast SEO.
Haddii aad isticmaalayso tifaftiraha xannibaadda, waxaad ka heli doontaa Yoast SEO doorasho cusub ee dhinaca tifaftiraha.
Waxaad dooran kartaa habka adiga kugu habboon, taas oo ku fiican haddii aad doorbideyso habka sanduuqa meta (maadaama Xisaabta Darajada aysan ku siinin sanduuqa meta ee tifaftiraha block).
Haddii aad isticmaasho bar-side-ka tifaftiraha block, waxaad heli doontaa dhammaan xulashooyinka ku jira hal tiir:
Interface-ka Yoast SEO
Waxaad kordhin kartaa qayb kasta si aad u aragto macluumaad dheeraad ah. Tusaale ahaan, haddii aad karti u siisay jaangooyooyinka calaamadaynta schema, waxaad samayn kartaa qayb gaar ah oo ka mid ah nooca qaabaynta qoraalka Schema qaybta.
Waxa kale oo aad riixi kartaa ikhtiyaarada "fiiri-fiirinta" si aad u aragto macluumaadkaaga qayb yar oo soo baxay:
Tifaftiraha Yoast SEO snippet
Doorashada kale waa in la isticmaalo sanduuqa meta, kaas oo ka muuqda hoos tifaftiraha oo u qaybiya dejintiisa afar tiir:
SEO - deji cinwaanno/ sharraxaad, eeg falanqaynta kelmadda muhiimka ah, oo xakamee goobaha horumarsan sida summada robots-ka iyo isku-xireyaasha canonical.
Akhriska - eeg talooyinka falanqaynta wax-akhriska.
Schema – u dooro nooca schema qaybtan nuxurka ah.
Bulshada - U samee macluumaadka garaafyada furan ee Facebook iyo Twitter.
Sanduuqa meta ee Yoast SEO
Darajada Xisaab vs Yoast SEO - Falanqaynta Ereyga Muhiimka ah
Labada darajada Xisaabta iyo Yoast SEO labaduba waxay taageeraan falanqaynta ereyga muhiimka ah markaad abuurayso nuxur. Taasi waa, waxaad ku dari kartaa ereyada muhiimka ah ee aad beegsaneyso plugin-kuna wuxuu falanqeyn doonaa macluumaadkaaga si uu kuugu sheego sida wanaagsan ee loo hagaajiyay iyo haddii aad u baahan tahay inaad sameyso wax isbeddel ah.
Tani waa qayb kale oo ay runtii ku xiran tahay dookhaaga shakhsi ahaaneed iyo midka interface / habka aad doorbidayso. Mid ka mid ah faa'iidooyinka xisaabta Darajada, si kastaba ha ahaatee, ayaa ah inay kuu ogolaato inaad falanqaynayso ereyo badan oo bilaash ah. Iyada oo leh nooca bilaashka ah ee Yoast SEO, waxaad kaliya falanqayn kartaa hal erey oo muhiim ah (inkasta oo nooca premium uu ogolaado falanqaynta ereyada muhiimka ah ee badan).
Xitaa nooca bilaashka ah, Xisaabta Darajooyinka ayaa kuu ogolaanaysa inaad falanqeyso ilaa shan erey oo muhiim ah markiiba. Waxa kaliya ee aad sameyso waa gali kelmadda muhiimka ah ee aad rabto in aad beegsato oo Darajooyinka Xisaabtu waxay noqon doontaa:
Ku sii dhibco ah 0-100 oo ay la socdaan qaar ka mid ah-codeing. Haddii aad dhaliso in ka badan 80, waxaad heli doontaa "cagaaran", taas oo wanaagsan.
Liis garee tilmaamo gaar ah iyo inaad la kulantay iyo haddii kale. Tusaale ahaan, eraygaaga diiradda ma ku jiraa cinwaanka SEO? Immisa jeer ayaad u isticmaashay nuxurka?
Liiska soo jeedinta ee darajada Xisaabta waxaa ka mid ah labadaba bogga SEO iyo sidoo kale arrimo kale sida cinwaanka/akhrinta nuxurka:
Waxaad u rogi kartaa ereyada muhiimka ah ee kala duwan adiga oo gujinaya liiska. Tusaale ahaan, haddii aad dooratid erey muhiim ah oo ka duwan, falanqaynta ayaa isbeddeli doonta si ay diiradda u saarto ereyga muhiimka ah ee gaarka ah.
Nooca bilaashka ah ee WordPress.org, Yoast SEO wuxuu kaliya kuu ogolaanayaa inaad falanqeyso hal erey oo muhiim ah qayb kasta oo ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u cusboonaysiiso nooca premium, si kastaba ha ahaatee, waxaad awoodi doontaa inaad falanqeyso ereyo badan oo muhiim ah.
Mar labaad, sidii aan ku tusinnay qaybaha is-dhexgalka isticmaalaha, waxaad ka heli kartaa talooyinka falanqaynta labada dhinac ee tifaftiraha block ama sanduuqa meta ee ka hooseeya tifaftiraha midkood.
Falanqaynta waxay si qurux badan u shaqeysaa si la mid ah Xisaabta Darajada - waxaad gelisaa ereygaaga furaha ah ka dibna Yoast SEO wuxuu ku siinayaa dhibco wuxuuna sidoo kale isbarbar dhigayaa nuxurka liiska talooyinka gaarka ah.
Ma u baahan tahay heer sare, degdeg ah, iyo martigelin ammaan ah mareegahaaga cusub? Behmaster waxay siisaa adeegayaal xawli badan leh iyo 24/7 taageero heer caalami ah oo ka timaada khubarada WordPress. Eeg qorshayaashayada
Dhibcaha Yoast SEO waa mid gaar ah, inkastoo. Ma jiro qiimeyn tiro waxaana jira saddex doorasho oo keliya:
The Yoast SEO falanqaynta keyword
Yoast SEO sidoo kale waxay u kala soocdaa falanqaynta wax-akhriskeeda dhibcaha u gaar ah, sidoo kale leh nidaam isku mid ah dhibcaha. Falanqaynta wax-akhrisku waxay noqon kartaa wax yar oo qalafsan maadaama miisaanka dhibcaha mararka qaarkood uu dareemo gar-darro.
Tusaale ahaan, waxa suurtogal ah in aad ka boodo casaanka una gudubto cagaar kaliya adiga oo bedela hal xaraf oo ku jira nuxurkaaga. Guud ahaan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa talooyinka akhrinta ee gaarka ah marka loo eego dhibcahaaga dhabta ah.
Falanqaynta akhriska ee Yoast SEO
Darajada Xisaab vs Yoast SEO - Qiimaha
Labada darajada Xisaabta iyo Yoast SEO labaduba waa bilaash WordPress.org. Kadibna, labada horumariyayaashu waxay sidoo kale iibiyaan noocyo qaali ah oo leh astaamo dheeri ah.
Tani waa isbeddel weyn oo loogu talagalay Xisaabta Darajada maadaama, muddo dheer, ay ku timid nooc bilaash ah oo keliya. Si kastaba ha noqotee, horumariyuhu wuxuu bilaabay nooca Pro ee plugin bishii Noofambar 2020. Waxay ku daraysaa astaamo cusub mana saameynayso mid ka mid ah sifooyinka jira ee markii horeba bilaashka ahaa.
Guud ahaan, nooca heerka sare ee Xisaabta ayaa ka jaban Yoast SEO saddex sababood dartood:
Qiimayaasha heerka sare ee Xisaabta way ka hooseeyaan Yoast SEO (inkasta oo taasi isbedeli karto).
Qorshaha sare ee xisaabta darajada wuxuu taageeraa mareegaha aan xadidnayn, halka Yoast SEO aanu bixin shati aan xadidnayn.
Xisaabta darajada waxay leedahay kaliya hal qorshe oo khidmad ah oo leh dhammaan sifooyinka, halka Yoast SEO ay leedahay kordhinta premium-ka badan. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ku darto taageerada SEO maxalliga ah, taasi waa iibsi gaar ah.
Waqtigan xaadirka ah, Xisaabta Darajooyinka waxay bixisaa laba qorshe oo loogu talagalay nooca qaaliga ah:
Pro – $59 – u isticmaal mareegaha gaarka ah ee aan xadidnayn oo la soco ilaa 1,000 erey oo muhiim ah.
Business – $199 – u isticmaal si aan xad lahayn mareegaha gaarka ah iyo macmiilka oo lasoco ilaa 20,000 oo ereyada muhiimka ah.
Siciradan waxaa loo calaamadeeyay inay yihiin "soo bandhig" gaar ah. Haddii Xisaabta Darajooyinka ay u dhaqaaqdo inay ku dalacdo qiimaha liiska oo dhan, waxaad bixin doontaa:
Pro - $ 129
Business - $ 429
Way adag tahay in la sheego in Xisaabta Darajooyinka ay runtii dallaci doonto qiimayaashan mustaqbalka ama haddii tani ay noqon doonto istiraatiijiyad qiimo dhimis weligeed cagaar ah oo lagu daro degdeg.
Waxaa jira laba nooc oo ah bixinta premium ee Yoast SEO.
Marka hore, waxaa jira plugin-ka ugu muhiimsan, kaas oo ku siinaya inaad marin u hesho sifooyinka sida falanqaynta ereyada muhiimka ah ee badan, soo jeedinta isku xirka gudaha, iyo in ka badan. Kharashka bixinta khidmadaha asaasiga ah $89 si loogu isticmaalo hal goob - Waxaad sidoo kale heli kartaa qiimo dhimis shatiyada goobta badan:
Yoast SEO qiimihiisu yahay
Kadibna, waxaa sidoo kale jira afar kordhin oo qaali ah oo loogu talagalay noocyo gaar ah oo SEO ah:
Fiidiyowga SEO ee WordPress - laga bilaabo $ 69 halkii goob.
SEO maxaliga ah ee WordPress - laga bilaabo $69 halkii goob.
Wararka SEO ee WordPress - laga bilaabo $69 halkii goob.
Yoast WooCommerce SEO - laga bilaabo $ 69 hal goob.
Darajada Xisaabta vs Yoast - FAQ
Si aan wax u dhammayno, aynu dulmarno su'aalaha soo noqnoqda ee aad wali hayso isbarbardhiggayaga ka dib.
Waa kee wordpress_plugin_">Plugin ayaa bixiya astaamo dheeri ah?
Guud ahaan, Xisaabta darajada waxay leedahay astaamo ka badan Yoast SEO, gaar ahaan marka la barbar dhigo noocyada bilaashka ah.
Plugin kee baa ka caansan?
Yoast SEO waa mid caan ah - dhab ahaantii, waa mid ka mid ah plugins-yada ugu caansan ee wakhti kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale in badan ka dheerayd Xisaabta Darajada. Marka la eego sida ay u yar tahay, Xisaabta Darajooyinka waa mid caan ah.
Sida laga soo xigtay WordPress.org, Yoast SEO waa firfircoon 5+ milyan oo goobood (taas oo ah magaca ugu sarreeya ee WordPress.org - waxay u badan tahay in aad uga badan taas) halka Darajada Xisaabtu ay ka shaqeyso 600,000+ goobood.
Pluginkee ayaa leh dib u eegis wanaagsan?
Labada Yoast SEO iyo Xisaabta Darajada labaduba waxay leeyihiin dib u eegis heersare ah WordPress.org. Dhab ahaantii, labaduba waa la qiimeeyay 4.9 baxay 5, inkastoo Yoast SEO uu leeyahay saldhig dib u eegis aad u weyn:
Yoast SEO - 4.9-xiddigaha qiimaynta kor 27,284 dib u eegis.
Xisaabta Xisaabta - 4.9-xiddigaha qiimaynta kor 2,064 dib u eegis.
Xisaabta Darajooyinka Ma Badbaa?
Sababtoo ah Xisaabta Darajooyinka waa plugin cusub halka Yoast SEO ay jirtay sanado, dadka qaar ayaa ka walwala badbaadada Xisaabta Darajada.
Ha werwerin! Xisaabta darajada weli waxay ka timaadaa kooxda horumarinta WordPress ee la aasaasay (MyThemeShop) waxayna sidoo kale dhistay sumcad wanaagsan waqtigii la heli jiray.
2,000+ qof oo siisay 4.9-xiddig ee WordPress.org ma khaldana.
Xisaabta darajadu miyay ka fiican tahay Yoast SEO?
Hagaag, kani waa shakhsiyad qurux badan, waana waxa aanu isku daynay inaanu galno qoraalkan. Xisaabta darajada waxay bixisaa sifooyin ka badan Yoast SEO, gaar ahaan marka aad ka hadlayso noocyada bilaashka ah.
Si kastaba ha noqotee, taasi macnaheedu maaha inay u fiican tahay goobtaada - runtii waxay kuxirantahay haddii aad u maleyneyso inaad dhab ahaantii isticmaali doonto sifooyinkaas iyo inta aad ku qiimeyso inaad la socoto ikhtiyaarka "ka sii qoto dheer" ee Yoast SEO.
Isku day inaad hesho plugin sax ah SEO ee goobtaada? 🔍 Waxba ha sii eegin! Boostada isbarbardhigga waxay jebisay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato laba ka mid ah plugins-yada SEO ee ugu caansan halkaas…Riix halkan Tweet
Raadinta darajadaada Xisaabta vs Yoast SEO, waa inay si cad u caddahay in labaduba ay yihiin kuwo tayo leh oo SEO ah. Tirooyinka iyo faallooyinka been ma sheegaan.
Asal ahaan, ma samayn doontid "qalad" doorashada plugin. Waa wax badan oo ku saabsan qaadashada plugin-ka ugu fiican ee kaa caawinaya inaad gaarto yoolalkaaga SEO.
Guud ahaan, Xisaabta Darajooyinka ayaa hubaal ah inay ku siinayso astaamo badan nooca bilaashka ah. Tusaale ahaan, waxaad heli doontaa falanqaynta ereyo badan oo muhiim ah, 404 ogaanshaha, maamulaha wareejinta, sifooyinka SEO-ga maxalliga ah, soo jeedinta isku xirka gudaha, iyo in ka badan. Kuwani waa dhammaan waxyaabaha Yoast SEO midkood ku dalaco ama aanu bixin.
Haddii aad u maleyneyso inaad isticmaali doonto sifooyinkaas, markaa waxaa laga yaabaa in Darajada Xisaabtu ay kugu habboon tahay. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay nooca qofka kaliya ee isticmaala plugin SEO-gaaga si aad u dejiso qaar ka mid ah cinwaannada SEO-ga / sharraxaadda lagana yaabo in aad u wanaajiso hal erey oo muhiim ah, run ahaantii ma aad ka helayso qiimo badan sifooyinkaas.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Xisaabta darajada waa in ay qaabaysan tahay, markaa waxaad gabyi kartaa astaamo kasta oo aadan rabin inaad iska ilaaliso bararka (si la mid ah waa run Yoast SEO).
Si loo soo koobo:
Haddii aad rabto sifooyinka ugu badan, Xisaabta darajada hadda way ka horeysaa, gaar ahaan marka la barbardhigo noocyada bilaashka ah.
Haddii aadan ka faa'iideysanayn sifooyinkaas dheeraadka ah oo aad rabto wax aad ku xakameyso cinwaannada SEO-gaaga / sharraxaadaha iyo goobaha kale ee aasaasiga ah, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale doorato adigoo ku saleysan interface-ka aad doorbideyso. Ama, haddii aad qiimeyso rikoorka dheer ee Yoast SEO, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad raacdo "ikhtiraacida la sameeyay" - xaqiiqdii waxaa jira faa'iido leh inaad haysato rikoor toban sano ah.
Ugu dambeyntii, haddii aad la yaabban tahay midka aan halkan ku isticmaalno Behmaster, Waxaan hadda isticmaaleynaa Yoast SEO si aan u wanaajino boostada aad hadda akhrinayso (iyo wax kasta oo kale). Haddii aad rabto inaad nagu soo biirto, waxaad hubin kartaa hagahayaga oo dhamaystiran sida loo isticmaalo Yoast SEO.
Ma haysaa su'aalo dheeraad ah ama fikrado ku saabsan isbarbardhigga darajada Xisaabta vs Yoast SEO? Ma isku dayday labadaba? Hadday haa tahay, kee baad door bidday? Nala socodsii faallooyinka!
Shaxda ugu Fiican ee Tusmada Plugins ee 2021
Shan siyaabood oo aad ku noqon karto 'Search Sherpa' ururkaaga